» पैसाको लागि आफ्नै दिदी भिनाजुले ४० लाख दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउने योजना ! योजना यसरी भयो असफल (भिडियो) हेर्नुस् । पैसाको लागि आफ्नै दिदी भिनाजुले ४० लाख दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउने योजना ! योजना यसरी भयो असफल (भिडियो) हेर्नुस् । – हाम्रो खबर
काठमाडौ । सिन्धुलीका कृष्णहरी खड्का अहिले काठमाडौको कपनमा बस्छन् । २०६७ सालमा वुवाको निधन भयो । परिवारमा तीन दिदी बहिनी र एक भाई थिए । भाई काठमाडौमा पढाईको सिलसिलामा थिए । सिन्धुलीमा रहेकी एक युवतीसंग भाईको प्रेम थियो । उनको नाम कल्पना बस्नेत हो ।”
“उनीसंग विवाह भयो । विवाह पछि दिदी भिनाजुको अनावश्यक दवाव सुरु भयो । आफुले भने अनुसार गर्नुपर्छ भनेर वुहारीलाई अनावश्यक दवाव दिइन थालेको आफुले थाहा पाए ।”
तिन दिदीहरुको विवाह भइसकेको थियो । वुवाको निधन पछि उनको सम्पत्तीमा दिदीहरुले पनि आश गरे । करोडौको जग्गा बुवाको नाममा थियो । वुवाको निधन पछि आमाको नामवाट माइलो दिदीले आफुले नाममा जग्गा गराइन् । भाईले सल्लाहले माग्दा दिदीले दिइनन् । काठमाडौमा दिदीलाई घर पनि वुवाले नै बनाइदिएको उनलाई थाहा भएपनि उनले दावी गरेनन् ।”
“तर सिन्धुलीमा भएको सम्पत्तीमा विवाह भएर गएका दिदीहरुले दावी गर्न नपाउने उनको दावी हो । उनीहरुले सिन्धुली जिल्ला अदालतवाट आमा र आफ्नो अंशियार बनाएर दिदीवाट आफ्नो नाममा जग्गा आयो ।”
“त्यस मध्य केही जग्गा दिदीले नै बेचिसकेकी थिइन् । आफु सिधा भएका कारण जहिले पनि दिदी भिनाजुहरुले निकै दवावमा राख्ने गरेको पनि भाइको भनाई छ ।”
भाई सिधा छ त्यस्तै सिधा बुहारी ल्याएपछि सबै सम्पत्ती आफुले चलाउन पाइन्छ भन्ने सोच दिदी भिनाजुको रहेको आफुले थाहा पाएको भाईले बताएका छन् । तर बुहारीले उनीहरुको दवाव नमान्न थाले भान्जा समेतले आफुहरु माथि अनेक आरोप लगाउने गरेको उनको भनाई छ ।”
“तर अवस्था यति सम्म पुग्यो की दिदी भिनाजुले ४० लाखको सुपारी दिएर भाईको परिवार नै सिध्याउन खोजेको कुरा खुलेपछि भाई अहिले सार्वजनिक रुपमा वाहिर आएका छन् ।”
यो पनि “कान्छि श्रीमती भेट्न भन्दै निस्केका हेमराजको श’ व १७ दिनपछि जंगलमा स’डेको, अवस्थामा भेटियो, छोराको शव देखेर आमा वेहोस् (भिडियो हेर्नुस्)”
“काठमाडौ । चल्लाको औषधी लिन जान्छु भन्दै गत माघ १४ गते घरवाट हिडेका बाँकेका हेमराज खत्री घर फर्किएनन् । भोलीपल्ट देखि उनको खोजी थालिएको थियो । हराएको १७ दिन पछि उनको शव जंगलमा फेला परेको छ । श व स डे को अवस्थामा फेला परेको हो ।”
“घटनास्थल हेर्दा घटना शं का स्पद भएको आफन्तको दावी छ । घटनास्थल नजिकै मोटरसाइकल र उनको हेलमेट पनि फेला परेको छ । उनी बाइक संगै उनी हराएका थिए ।”
“उनको बाँया हात चलाउँथे । तर मोटरसाइकलमा उनले हेलमेट दाँया तर्फ देखिएको कारण परिवारले घटना संकास्पद भएको बताएका छन् । घटनास्थलमा दुईवटा चाउचाउको खोल, एक पानीको बोतल र सुन्तला पनि भेटिएको घटनास्थलमा पुगेकाहरुले तयार पारेको भिडियोमा देख्न सकिन्छ । “सु र्ती जन्य पदार्थ पनि प्रयोग नगर्ने हेमराजको श व नजिक केही सु र्ती जन्य पदार्थको प्याकेट र चु रो टका ठुटो पनि फेला परेको हो ।”
“दुई वर्ष अघि श्याम कुमारी चौधरीलाई उनले कान्छी श्रीमतीका रुपमा भित्र्याएको गाउँले बताउँछन् । श्यामकुमारीकै घर नजिक भएको जंगलमा शव फेला पर्नु, उनलाई भेट्न भनेर निस्केका हेमराज १७ दिन सम्म हराउनु र घटनास्थलमा देखिएका सामाग्रीले पनि घटना रहस्यमय भएको हेमराजका परिवारको भनाई छ ।
“घरयासी ब्यवहारका कारण उनीहरुको छोडपत्र भएको थियो । तर पछिल्लो केही दिन यता उनीहरु भेटघाट समेत गर्न थालेका थिए ।
“म बाँच्नु, त अब के का, लागि ? – सपना रोका मगर ”
बीबीसीले प्रत्येक वर्षकार्यक्रम अन्तर्गत महिलाकेन्द्रित समाचारलाई विशेष महत्त्वका साथ प्रकाशित तथा प्रसारित गर्छ। यही अवसरमा विश्वभरि विशेष योगदान दिने १०० महिलाको नाम बीबीसीले प्रकाशित पनि गर्ने गरेको छ। यसपटक नेपालबाट १०० महिलाको सूचीमा १९ वर्षीया सपना रोका मगर परेकी छन्। उनी बेवारिसे शव व्यवस्थापनमा संलग्न छिन्।
बीबीसीको सूचीमा परेपछि उनले आफू गौरवान्वित भएको बताएकी छन्। “यसबाट मैले थप प्रोत्साहन पाएकी छ। अनि यो सामान्य नेपाली महिलाको लागि प्रेरणा हो, हामी सबैको लागि ठूलो सम्मान हो।
म्याग्दी घर भएकी सपना पढाइको लागि काठमाण्डौ आएकी थिईन । यहाँ आएपछि उनले बे’वारिसे ला’श ज’लाउने गरेको देखेपछि उनले पनि यही काम थालेकी थिइन्
अलपत्र परेका ला’शको व्यवस्थापन गर्न पाउँदा आफूलाई सन्तुष्टि मिल्ने उनि बताउछिन । साथीभाइको संगतका कारण आफूले पनि सडकको जिन्दगी भोगेको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन् ‘एसएलसीपछि साथीभाइको लहलहैमा लागेर वि’श्वासघा’तमा परेर सडकमा पुगेको थिए । तर अहिले म त्यो ठाउँमा छैन, जुन ठाउँमा म हुन्थ्ये । म अहिले धेरै खुशी छु । यो कामले मलाई आफ्नै परिचय दिएको छ ।’
२०७३ सालमा म्याग्दीमा एसएलसी सकेकी उनि त्यसपछि सदरमुकाम बेनीमा आएर कक्षा ११ मा भर्ना भएकी थिइन । तर, त्यसपछि साथी संगतमा परेर उनि काठमाण्डौ आएकी थिईन । अहिले आफूले राम्रो कामको सुरुवात गरे पनि केहीले विगतलाई सम्झाएर आ’लोचना गर्ने गरेका उनि बताउने गर्छिन् ।
सपना रोका मगर ले आफ्नो दु’ख र पि’डा व्यक्त गर्दै अन्तर्वार्तामा आफु बाच्नु को पनि के अर्थ भन्ने तर्क प्रस्तुत गरेकि छिन् । सपना ले आफुले धेरै दुख पि’डा भोगेको र आमा लाई मानिस ले छोरी बि’ग्रियो भन्दा दुख लागेको र अहिले आमा को नाम राखेको समेत कुरा उल्लेख गरेकी छिन ।
प्रहरीले विनयजंग बस्नेतको खोजि गरिरहेको छ । सपना रोका मगरले उनीहरुद्ध जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजी सुरु गरेको हो । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले उजुरु दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जीका लागि अदालतमा पुगेको बताए । पुर्जी जारी भएपनि बस्नेतलाई पक्राउ गरिने उनले जानकारी दिए।
बस्नेतले युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा सपनाका नां’गा त’स्वीर देखाइदिने ध’म्की दिएपछि मगरले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी हुन् ।
सपनाले बस्नेतविरूद्ध अ’भद्र व्य’वहा’रको मुद्दा जाहेरी दिएकी हुन् । उनका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौं बाहिर छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। हेरौ भिडियो सहित: